Ecommerce: fanatsarana ny môtera na estetika?
Amin'izao fotoana izao, ny tontolon'ny maoderina amin'ny fividianana fikarohana momba ny ecommerce dia nanjary fitaovam-piadiana ho an'ny fampandehanana ny orinasam-pandraharahana an-tserasera maneran-tany. Ny fahombiazan'ity asa ity, ary ny fanatanterahana ny tetikasam-pandraharanao ara-dalàna dia mila ny fahatakarana marina sy ny traikefa manan-danja eo amin'ny sehatra roa ianao - ecommerce sy ny fividianana fikarohana ara-tsosialy, be loatra ary be pitsiny mba hikarakarana ireo mpandraharaha tsy fantatra na tsy mahay.
Raha ny amiko kosa, tsy vintana aho ny nitantana izany rehetra izany indray mandeha - create a free graphic design online. Raha ny marina, naharitra valo taona aho tamin'ny asa fitantanana mafy hifehezana tranonkala maromaro momba ny orinasa maro mifototra amin'ny sehatr'asa an-tserasera maro ho an'ny ecommerce sy ny teknikam-pamokarana fikarohana. Ary efa zatra niady tamin'ny zava-drehetra azonao eritreretina aho - manomboka amin'ny karazan-tsakafo isan-karazany, ho an'ny fitaovana teknolojia avo lenta.
Fahatakarana ny olana
Ny voalohany ary angamba ny zava-dehibe indrindra azoko fantarina dia ny lanjan'ny liona amin'ny tetikasa ara-barotra amin'ny aterineto dia matetika iharan'ny herisetra Tena azo ampifanarahana ary na dia mitovy aza ny loha-hevitra momba ny fikarohana. Midika izany fa na aiza na aiza ny mpihaino azy na ny tsenan'ny tsenam-bidy, ny hetraketraka indrindra amin'ny aterineto, izay mitondra fiara fitaterana marokoroko bebe kokoa, farany dia miteraka ny fidiram-bola ambony - miantehitra amin'ny hoe ny fomba fitantanana ny paikady fitadiavam-bola amin'ny ecommerce ny mpitantana ny tetikasany, na ny tompon'ny orinasa irery ihany.
Tsy mifantoka manokana amin'ny SEO
Alohan'ny zavatra hafa, avelao atrehina izany - ny ankamaroan'ny tetikasa mifandraika amin'izany dia matetika vokatry ny fanapahan-kevitra tsy manara-penitra ho an'ny fampandrosoana. Midika izany fa matetika ireo mpandraharaha momba ny fandraharahana no mitondra ny orinasan-tseratsera amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny amin'ny fanandramana mpampiasa tsaratsara kokoa sy ny fijerena ny fijerena mozika amin'ny ankapobeny, fa tsy mihetsika eo amin'ny làlana marina mankany amin'ny fividianana fikarohana ara-elektronika.
Alaivo sary an-tsaina ny tranga iray tena izy, raha misy ny marika famantarana vaovao dia tsy mifantoka afa-tsy amin'ny famolavolana tontolo manintona sy mahomby, tsy misy fanamafisana manokana ny fanatsarana ny fikarohana ( SEO). Amin'izany fomba izany dia hiharatsy hatrany hatrany ny orinasam-barotra hatramin'ny voalohany, i. f. , tsy firaharahiana ny fahafahana mifandray amin'ny mpanjifa maivana mivantana avy amin'ny fantsona organika, izay hamboarina ho amina toetr'ireo mpividy tena ao anatin'ny lavaka. Saingy tonga ny vaovao mahafaly eto - tsy ilaina ny mahatsiaro ho diso fanantenana, na dia eo ianao izao na mbola tsy mahatsiaro ho matoky tanteraka momba ny fividianana fikarohana momba ny fikarohana ecommerce. Eto ambany eto aho dia mitanisa ny toro-hevitra azo ampiasaina hanaporofoana ny fialan-tsasatro izay niainga avy tamin'ny zavatra niainako manokana ary, mazava ho azy, mifototra amin'ny fahadisoako taloha. Manantena aho fa ireto torohevitra fohy manaraka ireto dia hanampy anao hanangana tetikasam-barotra iray mahomby izay miorina amin'ny iray amin'ireo rafitra ecommerce maoderina, mbola mihamitombo hatrany hatrany amin'izao fotoana izao.
Miasa amin'ny famariparitan'ny vokatra tokana
Voalohany indrindra, raha toa ka saika ireo marika vaovao dia tarihin'ny olona marina miaraka amin'ny fahalalana manandaza momba ny vokatr'izy ireo na serivisy. Na izany aza, ireo manam-pahaizana anatiny dia matetika mahatsapa ny tsy fahampian'ny fahatakarana amin'ny fomba fijerena ny fividianana fikarohana momba ny ecommerce sy ny fomba fiasany. Amin'izany fomba izany, ny famariparitan'ny vokatra vokatra matetika dia toy ny tetezana, na ny mety ho entina mivantana avy amin'ny mpamokatra. Vokatr'izany, tsy lavitra loatra ny maha-tokana, na fampahafantarana na fandraisana andraikitra toy izany - ny famaritana toy izany dia tsy hanome velively ny vokatra avo lenta hita ao amin'ny lisitry ny fikarohana voaloka fototra.
Izany no mahatonga anao manolo-tena hiasa tsara amin'ny famaritana vokatra vokatrao mba ahafahan'izy ireo "miresaka" amin'ny mpihaino, mifanandrify amin'ny fangatahana fikarohana mahazatra amin'ny teny sy ny fehezanteny manan-danja, ary misolo tena ireo zavatra amidy amin'ny ambaratonga faran'izay feno ary ny fomba mahavariana amin'ny fotoana iray ihany. Na inona na inona vokatra na serivisy anananao, dia asio famaritana ao anatin'ny 150 ka hatramin'ny 300 ireo famaritana ireo mba hifanaraka amin'ny hevi-dehibe momba ny semantika ao amin'ny ecommerce search engine optimization. Raha natao marina, ny famaritana vokatra vokatrao dia mety tsara amin'ny fampandraisana anjara ny mpanjifa matihanina mivantana avy amin'ny valin'ny fikarohana biolojika.
Tohizo ny famerenana famerenana famerenana famerenana
Ny fananana ny zavatra rehetra atolotra anao amin'ny marika amam-panomezana anao dia fomba lehibe hanatsarana ny lanjan'ny pejy vokatrao. Raha ny marina, ny zavatra malaza indrindra azonao amidy dia ny famerenana bebe kokoa sy ny torolàlana fampandrenesana tsy maintsy ilaina handefa fiovàna misimisy kokoa. Mametraka ny tsikerao momba ny vokatrao, aza mampiasa ny fitaovam-pivarotana isan-karazany, aoka ianao hamorona mba hanomezam-pahalalana bebe kokoa mifototra amin'ny traikefan'ny mpampiasa sy ny toro-marika manokana. Ataovy mandrakariva ny tsara indrindra azonao anaovana fanamarinana sy fijoroana vavolombelona bebe kokoa. Raha manao izany ianao, ny vokatrao dia hanana lanjany bebe kokoa sy manam-pahefana matanjaka kokoa amin'ny fomba fijerin'ny fikarakarana fikarohana momba ny ecommerce, amin'ny farany amin'ny famolavolana fivoarana bebe kokoa.
Aza manadino ny teny fanalahidy
Midika fa tsy tokony ho lasa lavitra loatra ianao amin'ny famoahana ny votoatin'ny pejy entinao miaraka amin'ny teny fototra, araka izay azo atao. Adinoy izany hevitra izany fa tsy hanao izany mihitsy. Raha ny marina, tsy afaka manintona mpitsidika maromaro ianao na hanatsara ny fahefan'ny teny fototrao fototra - amin'ny fametrahana ny famaritana vokatrao miaraka amin'ny votoatin'ny teny sy fehezanteny. Raha tokony ho izany, tokony hanohy hikolokolo votoaty sy manan-tsaina tanteraka ianao izay hanome lanja kokoa ny mpanjifanao, mifanaraka ny fepetra takian'ny e-commerce amin'ny fividianana fikarohana amin'ny fotoana iray.
Farany, manao zavatra sasantsasany amin'ny SEO
midika amiko fa tokony hamita ny lahatsoratrao ianao, hanatsara ny URL, ary hamorona lohateny miavaka sy adaptive sitemap. Voalohany indrindra, avelao ny fitaovana fitadiavana hahatakatra ny votoatiny hita maso amin'ny alàlan'ny fananana sary rehetra ao amin'ny pejin-tranonkalanao izay misy endritsoratra albany izay manome famaritana mazava, voamariky ny tenimiafina iray ary manome fitenenana ny anaran'ny marikao.
Faharoa, mamorona lohateny tsy manam-paharoa miara-miasa amin'ny tenifototra tokana fotsiny. Ataovy azo antoka fa tsy misy duplicates na plagiarism eto. Manaraka izany, mamelà ny adin-tsainao tsy misy dikany mba hampahalalana bebe kokoa, anisan'izany ny tena anaran'ny vokatra sy ny sokajiny. Farany, ny fanaovana ny ecommerce search engine optimization dia mila anao mba hahazoana antoka fa ny asa andavanandro sy ny fanavaozam-baovao dia ekena tanteraka ary voasokajy amin'ny alalan'ireo crawlers. Noho izany, aza adino ny mamorona sitemap adapta iray. Na azonao atao ihany koa ny mampihatra ny votoatin'ny Content Management Systems miaraka amin'ny vahaolana sitemap automatique izay matetika ampiasaina amin'ny rafitra ara-barotra manerantany amin'ny Internet.